Abavelisi beBeta-Lactoglobulin (9045-23-2) -iPhcoker Chemical
I-act-Lactoglobulin yeyona protheni iphambili yobisi lweenkomo kunye nobisi lweegusha (~ 3 g / l), kwaye ikwakhona nakwezinye izilwanyana ezanyisayo …….
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) ividiyo
IBeta-Lactoglobulin (9045-23-2) Suqobo
Igama lemveliso IBeta-Lactoglobulin
Igama leKhemikhali I-Lactoglobulin (LG); BLG; β -Lg
Inani leCAS 9045-23-2
I molecular WSibhozo 18,300
Sukufaneleka I-H2O: 10 mg / mL
Aukuguquka I-β-Lactoglobulin A isetyenziswe kubisi lwe-bovine:
Njengesigunyaziso sokulinganiswa kwesixhobo se-TriWave
• Njengomgangatho ekufumaneni kunye nasekunciphisweni kwe-β-lactoglobulin kubisi lwe-bovine ngokubuyela kwisigaba esiphakamileyo se-chromatography (HPLC) esebenzayo
• ekucoceni kunye nokulinganiswa kwemolekyuli yokuvavanywa kweesampulu zeeprotease
I-ac-Lactoglobulin yasetyenziswa ekuchongeni ubume bokuhluka kwe-κ-kesiin kubisi yi-isoelectric ejolise kwi-electrophoresis.
IBeta-Lactoglobulin (9045-23-2) Isishwankathelo
I-act-Lactoglobulin yeyona protheyini iphambili yobisi lweenkomo kunye nobisi lweegusha (~ 3 g / l), kwaye ikwakhona nakwezinye iintlobo ezininzi zezilwanyana ezanyisayo; into ephawulekayo ngaphandle kwabantu. Malunga neepesenti ezingama-20 zeeproteni zobisi lweenkomo zii-whey protein, kunye neyona nto iphambili kuyo yi-beta-lactoglobulin. I-act-Lactoglobulin ihlala isisithako esiphambili kwiipowder ze-Whey-based powders.
Iiprotheyini ezinamavili zinokuba yingozi ekutyeni komzimba Ubisi lweBovine yenye yezona zinto zibalulekileyo ze allergenic zokutya, ngakumbi abantwana. Ngenxa yoko, ukubhalwa kwe-beta-lactoglobulin okanye ubisi kunyanzelekile kumazwe amaninzi. Nangona kungekho mqobo uthintelayo osemthethweni weprotey ye-Whey, kucetyiswa kakhulu ukuba abavelisi bokutya bavavanye ukugxila okuncinci kakhulu ukukhusela abantu abangadibaniyo nokuphepha ukukhumbula okuhambelana ne-allergen.
Yintoni i IBeta-Lactoglobulin ?
IBeta-Lactoglobulin (ß-lactoglobulin, BLG) yiproteyini enkulu kubisi olufumileyo kwaye ikwakhona kubisi lwezinye izilwanyana. Malunga neepesenti ezingama-20 zeeproteni zobisi lwe-bovine ziiprotein ezinamavili, ezona zinto ziphambili zibizwa ngokuba yi-beta-lactoglobulin. IBeta-Lactoglobulin ihlala iyeyona nto iphambili kwii-powyers zeprotheyini esekwe kwi-Whey.
I-Beta-lactoglobulin yiprotein ye-globular yosapho lwe-lipocalin. Inobunzima beemolekyuli eziyi-18,300 kwaye inezintsalela ze-amino acid eziyi-162, kubandakanya nenani eliphezulu kakhulu le-amino acid (BCAAs).
IBeta-lactoglobulin (b-lactoglobulin / BLG) yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kubisi lwenkomo. Ngenye yeeprotheyini ezixhaphakileyo kubisi ukubangela ukungalunganga, nangona abantu abaninzi bengafani nezinye iiproteyini zobisi ezingaphezu kwesinye. I-BlG yeyona proteni ininzi kwi-Whey, ibala iipesenti ezingama-50 yeprotheyini epheleleyo kwiqhezu le-lactoserum kunye neepesenti ezili-10 zobisi lwenkomo.
Ngokubanzi, iiglobulin ziiproteni ezincinci ezisongelayo zaye zayindawo ebanzi, kwaye i-lactoglobulins zii-globulins ezikhoyo kubisi. Xa i-kesiin icinywe ngaphandle kobisi (umzekelo, nge-rennet okanye i-acidity), i-lactoglobulins isala ngasemva kwi-Whey (kunye ne-lactalbumin, i-lactose, iiminerali kunye ne-immunoglobulins). Iiprotheyini zimalunga ne-10% yolwelo olomileyo lwe-Whey, kwaye i-beta-lactoglobulin imalunga ne-65% yelo 10%.
I-Alpha-lactoglobulin ibandakanyeka kwi-lactose synthesis. Injongo ye-beta-lactoglobulin ayicacanga, kwaye nangona inokubopha ii-molekyuli ezininzi ezincinci ze-hydrophobic, eyona njongo iphambili kunokukwenza njengomthombo we-amino acid. IBeta-lactoglobulin ikwabonakalisiwe ukuba ikwazi ukubopha i-iron siderophores kwaye ke ngoko inokuba nendima ekulweni iintsholongwane.
Ukujongana nenyaniso yokuba Whey protein ngumxube we-beta-lactoglobulin, i-alpha lactalbumin, i-bovine serum albumin, kunye nee-immunoglobins. Abantu bahlala besebenzisa i-whey njengoncediso, kunye nokuxhathisa umthambo, ukunceda ukuphucula iiprotein zemisipha kunye nokukhuthaza ukukhula kobunzima bemisipha.
Izibonelelo ezinokubakho zokunceda ukunciphisa umzimba, iipropathi ezichasene nomhlaza, Ukuthoba i-cholesterol, isifo se-asthma, uxinzelelo lwegazi kunye nesifo sentliziyo, ukunciphisa ukunciphisa umzimba kubantu abane-HIV.
Ngokungafaniyo nezinye iiprotheyini eziphambili ze-whey, i-α-lactalbumin, akukho msebenzi ucacileyo uchongiwe we-β-lactoglobulin, oku ngaphandle kokuba yeyona nxalenye inkulu yenxalenye yeeproteni zeglobular ezizimeleyo kwi-whey (β-lactoglobulin ≈⁠ ⁠65%, I-α-lactalbumin 25⁠⁠ 8%, i-albhamu ye-serum ≈⁠⁠ ye-2%, enye i-≈⁠XNUMX%). I-lact-lactoglobulin yiprotini ye-lipocalin, kwaye inokubopha iimolekyuli ezininzi ze-hydrophobic, iphakamisa indima kwezothutho. I-lact-lactoglobulin ikwabonakalise ukuba iyakwazi ukubopha i-iron ngokusebenzisa i-siderophores kwaye ke inokuba nenxaxheba ekulweni iintsholongwane. I-homologue ye-β-lactoglobulin iyasilela kubisi lwebele lomntu.
IBeta-Lactoglobulin (BLG) yeyona proteni ininzi yevili kubisi lwe-bovine. I-LG ifundwe ngokubanzi kwishishini lokutya ngenxa yesondlo sayo kunye nokusebenza kwayo kwiinkqubo ezahlukeneyo zebhayiloji.
Ukongeza, i-BLG inokuba sisondlo esinexabiso eliphantsi se-antioxidant esifumaneka ngokulula nangokulula. I-BLG inokuthi isebenze njengesondlo se-antioxidant esifikeleleka ngokulula kwaye sitshiphu kubomi bemihla ngemihla. Ingxelo yethu yangaphambili ibonise ukuba i-cysteine ​​yasimahla ye-BLG idlala indima ekhuselayo kwimeko yobisi ye-antioxidant. I-BLG inoxanduva lwe-50% yomsebenzi wobisi we-antioxidant. Ayisiyiyo kuphela i-BLG esebenza ngokuthe ngqo njengesondlo se-antioxidant, ikwanokuthwala ezinye i-antioxidants nge-ligand yayo ebophayo. Yiyo loo nto inyusa ukubakho kokufumaneka kunye nenani lee-antioxidants ezikhoyo.
I-ac-Lactoglobulin yiprotey enkulu kwi-bovine yobisi icacisa i-50% yeeproteni kwi-Whey kodwa ayifumaneki kubisi lomntu. I-ac-Lactoglobulin ibeka izinto ezahlukeneyo ezisebenzayo kunye nezesondlo ezenze ukuba le proteni ibe yinto ehambelana nezinto ezininzi ekutyeni nasekusebenziseni izinto eziphilayo.
Iziphumo zeziphumo zeBeta-Lactoglobulin
Iimpawu zokungahambi kakuhle kwi-beta-lactoglobulin inokuba yile:
Ubomvu okanye iihagu
I-Beta-Lactoglobulin powder setyenziso
I-β-Lactoglobulin efakwa kukushisa okuphezulu njengabaphetheli bamanqatha e-polyunsaturated. I-Perez AA, i-Andermatten RB, iRubiolo AC, iSantiago LG Ukutya Chem Chem. Ngo-2014 Sep 1; 158 (): 66-72.
Ulwakhiwo kunye novavanyo lwe-allergenicity lwe-bovine β-lactoglobulin inyangwe yi-sonication-incediswa yimisebe. Yang F, Zou L, Wu Y, Wu Z, Yang A, Chen H, Li X. J Ubisi lweSayensi. 2020 ngoFebruwari 26
Uhlalutyo lweGenomic lweeNxalenye zeProtheyini yobisi eBrown Swiss Cattle. IMacedo Mota LF, i-Pegolo S, i-Bisutti V, i-Bittante G, i-Cecchinato A. Izilwanyana (i-Basel). 2020 Feb 2